Uboshiwe oweqa esitokisini | News24
Uboshiwe oweqa esitokisini
Uboshiwe uMnuz Xolani Ngubane oweqa esitokisini samaphoyisa aKwaDukuza.x
UMNUZ Xolani Ngubane, oneminyaka engu-25, oweqa esitokisini samaphoyisa aKwaDukuza ngeSonto, ngomhlaka 29 kuNhlaba (May), uboshiwe ngoMgqibelo odlule, ngomhlaka 4 kuNhlangulana (June) endaweni yaseNtshawini.
UMnuz Ngubane uboshwe ngemuva kokuthi elinye lamaphoyisa lithole iminingwane yokuthi ucashe kuphi.
Okhulumela amaphoyisa aKwaDukuza, u-warrant officer Johannes Khoza uthe: “Kubikwa ukuthi umsolwa uzame ukuhlasela leliphoyisa kodwa ngokwembiko iphoyisa lidubule umsolwa walimala,” kusho yena.
Uqhube wathe amaphoyisa asathungatha omunye umsolwa, uMnuz Snowy Maharaj, oneminyaka engu-28, oweqa noMnuz Ngubane.
Uthe: “Sithanda ukubonga amalungu omphakathi ngokuthi alekelele amaphoyisa ekulwisaneni nezigebengu,” kusho u-warrant officer Khoza.
Amaphoyisa axwayise amalungu omphakathi ukuthi uMnuz Maharaj umuntu oyingozi nokuthi ongaba nolwazi ukuthi ukuphi axhumane namaphoyisa aKwaDukuza enombolweni ethi 032 551 8229 noma athinte i-Crime Stop ku-08600 10111.